8 Imtixaanada Compressing Real inaan idiin sheego oo ka mid ah habka ugu wanaagsan si ay u cadaadi Video ah oo ay Wondershare Video Converter Ultimate
Xubno badan oo saameyn ku yeelan kartaa video size, si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala yaqaanaan wax yar oo ka mid ah sida dhererka video iyo qaabka. Maanta, waxaan jeclaan lahaa in aan u sharaxno sida loo cadaadin video ah oo ay siyaabo kala duwan oo Wondershare Video Converter noqon doonaa qalab waayo-aragnimo ah.
Waxaad u Baahan?
Wondershare Video Converter Ultimate (Free & Version mushaarka badan)
Video File A (Movie sida gudbiyeyaasha - Dark of Moon ah, qaab MP4)
A PC Windows / Mac
Aan aragno waxa dhici doona marka la isticmaalayo habab ay dabagal ku cadaadisaa video ah oo aan ka heli doontaa si ka fiican u isticmaala in ay ku cadaadisaa videos. First of dhan, download software iyo hubi interface ka.
Waxaa ka mid ah saddex hawlood oo waaweyn: cadaadisaa / badalo video in size / qaabab kala duwan, si toos ah u DVD gubi video iyo soo bixi online video si hoose. Halkan waxaan diiradda saari doonaa oo kaliya shaqo cadaadi. Click Add Files dhexe (ama jiita iyo hoos u faylka si toos ah) si aad u bilowdo, guud ahaan, waxa keliya qaadataa 3 labaad kasoo dajiyaan file a movie 5.9G (in waxa gudbiyeyaasha - Dark of Moon qaadataa).
Marka labaad, laba qaybood oo aad u baahan tahay in fiiro gaar ah:
Qaabka Output - taas oo si fudud iska indho laga yaabaa in ay dadka isticmaala cusub, maxaa yeelay, design ma aha wax iska cad oo ku filan in guji ilmadu button kor ku image ka? (Xaqa uu furmo suuqa ugu weyn)
Settings - Users ka heli kartaa in geeska hoose ee bidixda, darfahoodii ugu muhiimsan ee kor u taagaysa koobin kala duwan
Ka dib markii ay soo degida file video ah, dadka isticmaala leeyihiin 8 fursadaha in ay ku cadaadisaa in size yar. Aan tijaabi mid mid. Fadlan la soco in marka aan hubiyo hal hab, waxaanu bedeli doonaa oo keliya qiimaha la xiriira iyo kuwo kale sii default.
1. gaabin Length Video ah
Gaabin dhererka waqtiga waa habka ugu sareysa users yihiin dhigin inaad codsato, hoos qaybaha aan loo baahnayn jaray sida Intro ah / soo gabagabeeyay qeybo ka mid filimada ama joogsiyada firaaqada ee music video. Qof walba waa ogyahay marka MP4 diinta AVI, video baaxadda beddeli doonaa, laakiin sida badan (size) iyo sida ay u soomi (waqti) software waxa ay kala yihiin karo weli hawada.
Imtixaanka One - hubiyo waxa aan aad ka dib markii la gooyaa Intro ah / soo gabagabeeyay qeybo ka mid filim iyo tani waa shaashada aan ka heli kartaa ka dib dejinta filimka.
Guji Edit in la gooyaa qaybo aan loo baahnayn la goo qalab, dib u Time Start iyo dhamaanayo by jiidayeen dhug-goo in bar horumarka ka dibna riix OK.
Ka dhig MP4 qaab caga ee Qaabka Output
Riix Settings si ay u doortaan tayo sare leh , meel default waa Standard , sii video iyo goob audio sida default -Keep Original, iyo riix OK. (Fadlan la soco in tayada aan la beddeli karin ka yar qaar ka mid ah xaalada qaar iyo xataa si toos ah u qabsato sida koobin kala duwan. On hal gacan, tasii waxay waqti badan gacmaha oo doog ah si ay ula qabsadaan goob adkayn iyo dhinaca kale, ma ahan haboon xirfadeed dadka isticmaala oo u baahan kartaa qaababka ka badan shakhsi.)
Halkan waa ka hor iyo ka dib marka la barbardhigo goob Falanqeynta:
Ka hor inta
Fadlan la soco in Duration ka dhigan tahay dhererka waqtiga ku cadaadisaa movie aan.
Hadda, bal aynu ka fiiri inta ay hawshan ku qaadan doonaa.
Ka dib markii gujinaya Beddelaan , badhanka bedelay in jaalaha ah Cancel iyo markii aan PC waa 1: 27 PM, markii qiyaasta ay u dhammeeyaan howsha waa 00:10:02 (Saacadda: Daqiiqo Labaad).
Sidee ku saabsan tayada video ka dib markii Tifaftirayaasha? Bal aan hubiyo shaashada ee this video hoos ku qoran (ku dhowaad isku mid ah la asalka ah):
2. U beddelaan si ay qaabab kale
Marka aan cadaadisaa video ah oo ay soo gaabin waqtiga video ah, aan ma beddelo qaabka wax soo saarka si ay u dhawrto qiimaha u dhigma. Maxaa dhici doona haddii aan cadaadisaa file MP4 si video wmv ah?
Imtixaanka Laba - beddel Qaabka Output in wmv ka dib loo dhoofiyo filimka
Riix dejinta inay soo qaado Standard , haatan waxaad heli doontaa dib u eegis natiijada sida hoos. (Users Ha karaa Original oo ay goob kale, markii qaado tayo sare leh, laakiin caadiga ah waxa ay ka dhigi karaan. Taasi waa mid ka mid ah kala duwanaashaha ugu weyn ee ka soo siyaabo kale. Faraq kale oo ay dhigaan in Video codec ee wmv waa WMV1, WMV2 iyo WMV3, labada H264 ama MPEG-4).
Qiyaasta Time si Buuxi
Natiijada Tani waa isku hallayn on kuwaas oo isticmaala qaab caga dooran, imtixaankan ka yar, haddii aan soo qaado AVI / MOV sida qaab wax soo saarka, size video ka dib markii badaley noqon doonaa weli 5.9G, haddii DivX, size uu noqon doono ka weyn tahay asalka ah mid ka mid ah. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in la kala saaro qaabab kala duwan video hor inta aadan isticmaalin shaqo ama waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u hubiso mid mid. Hubi faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kala duwan halkan qaabab video .
Hubi shaashada ee Tifaftirayaasha video halkan (xallinta sare)
3. Isbedelka Video Encoder ka H264 in MPEG 4-
Waxaa jira laba heerarka codec ugu weyn, H264 iyo MPEG-4 markii compressing video ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aan sii element kale oo kasta sida Hayso Original iyo beddelo kaliya Encoders Video ah, waxaa jiri doona wixii isbeddel ah ee size video?
Imtixaanka Saddex - Sida wmv qaab, markii MPEG-4 sidii codec video ku cadaadisaa MP4 in file MP4, wax aan la filayn dhacaya.
Shaashada kor ku xusan waa ka hor iyo ka dib dejinta Falanqeynta ka dib markii codec video ku bedeshay in ay MPEG-4. Ma jiro wax isbedel markii qaado H264 ku cadaadisaa MP4 in MP4, halka wax laga beddelo si MPEG-4 oo kaliya, waxaa resize kartaa file, halka aan ku cadaadisaa laakiin ballaadhisid. Waxa ay u muuqataa this hab compressing ku haboon ma aha haddii aad dooneyso in ay ku cadaadisaa la MPEG-4.
Xalka: Waxaad ka bedeli kartaa oo tayo leh si ay u size yar iyo Rate Inyar si toos ah u beddeli doonaa, markaas video wax soo saarka baddali doonaa 1.1GB ee la soo dhaafay. (Dhab ahaantii in xal, waxaad isticmaali bedeli Rate Inyar ka cadaadisaa default video ah, kaas oo kuu sharxi doona in Test Six)
Hubi shaashada ee Tifaftirayaasha halkan (ka fiican tahay asalka u muuqataa) video:
4. Swift u dhaxaysa Qaraarada kala duwan: 240 * 160, 640 * 480 iyo 1280 * 720
Waxaa jira 14 qaraarada kala duwan ee goobaha iyo halkaan waxaan uun u qaadan 3 tusaalooyin si loo hubiyo waxa dhici doona haddii aan kaliya bedesho xal marka cadaadisaa video ah.
Imtixaanka Afar - halkan waa miiska isbarbardhigga:
Ka dib 1
Ka dib markii 2
Ka dib markii ay 3
5.9GB 424MB 1.4GB 4.5GB
Waa dareen caadi ah in compressing video xal sare qaadan doontaa waqti badan marka la xal u yar marka la barbar dhigo, si kastaba ha ahaatee, mar uun aad u maleeyay in farqiga u noqon kartaa 5 saacadood? Tani waa loo xalin lahaa ee software this.
Hubi shaashada ee Tifaftirayaasha halkan video (240 * 160, aad u kharibi):
5. Heerarka jire kala duwan sida 15fps, 30fps iyo 60fps
Imtixaanka Five - hayn goobaha kale ee asalka ah iyo beddelo Heerarka jir ah, aynu post 3 Screenshot si ay u sharxaan natiijada kaliya.
Ma jirto wax isbeddel ah marka dooran Heerarka jir ah oo kala duwan, si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale resize karaan faylka video asalka ah. Sida la beddelo oo keliya Encoder in ay MPEG-4, haddii dadka isticmaala kaliya bedeli Rate jir ah, video khariidad waxaa laga yaabaa weyn tahay kaliya hal asalka ah. In imtixaankan, video asalka ah waa uun 5.9G, halka video saarka waa 8.8GB.
Xalka: marka la barbar dhigo xulashooyinka kale goob sida qaado Size Small tayada video, ama doorato Rate Inyar hoose.
Hubi shaashada ee Tifaftirayaasha halkan video (30FPS, xallinta sare)
6. Rate Inyar kala duwan sida 512kbps, 1000kbps iyo 3000kbps
Waxaan soo sheegnay in la beddelo Rate Inyar ee Imtixaanka Saddex iyo Shan marka video finalka ballaadhisay mid asalka, taas oo aan ku gaari karo ujeedada cadaadi. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa in aan fiiro badan oo ku saabsan baaritaankaan. Aan mid mid u hubiso.
Imtixaanka Lix - 512KBPS -Madaxweynaha Tifaftirayaasha video size waa 706.7MB, waxa ay qaadataa 04:11:48 in aan dhamaystirno arrintan.
1000KBPS - The final video size waa 1.2GB, waxa ay qaadataa 04:24:35 si ay u dhameystiraan hawshan.
3000KBPS - The qaabka video size waa 3.4GB, waxa ay qaadataa 05:44:31 si ay u dhameystiraan hawshan.
No arrinta oo Inyar Rate aad doorato, waxa bedeli kartaa video le'eg ilaa xad.
Halkan calaamadee shaashada ee Tifaftirayaasha video (1000KBPS, 920 * 480, inkasta oo aad u qotomiyey sidii xal sare, ay muuqato in 920 * 480 si ay u gaaraan natiijo ka wanaagsan in video ah Tifaftirayaasha):
7. Change Audio Sample Rate ka 22050 Hz si 48000 Hz
Imtixaanka Todoba - waxaa jira 4 Audio Sample Heerarka users bedeli kartaa cadaadisaa videos in size kala duwan. Halkan waxaan kaliya isku day 22050 sida tusaale ahaan.
Dejinta video ka dibna dhigay ilaa Rate Sample Audio si 22050 Hz iyo sii dadka kale default. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto wax ku dhacay isbedel this. Under xaaladan, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in la beddelo koobin kale ah in ay u. Sidaa darteed, dadka isticmaala ma sheegi karo farqiga u ka video asalka.
8. Kala duwaan Rate Inyar Audio ka 64 kbps in 320 kbps
Marka isbedel Audio Rate Inyar, sida Audio Sample Rate, ma jiro wixii isbeddel ah ee dejinta Kulanka Xiisaha Leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhim badan haddii aad rabto in aad cadaadin video file in MP3.
Imtixaanka Siddeed -change qaab wax soo saarka si ay u MP3 ah
Riix Settings , waxaa jiri doona suuqa kala goob brand-cusub ka duwan imtixaan hore.
Halkan waxaan is barbardhigi kartaa 64KBPS la 320KBPS:
5.9GB 70.7MB 353.4MB
1920 * 1080 N / A N / A
Rate Inyar Audio
Ka dhig Original 64 kbps 320KBPS
Waxaa jira ugu yaraan 8 siyaabo aad u cadaadisaa videos la Wondershare Video Converter Ultimate, laba kasta oo siyaabo la isku dari karaa in ay waddo cusub. Waxaa jira naqshado badan oo saaxiibtinimo si ay u caawiyaan gacmaha cagaaran inay ka adkaadaan xirfadaha dhowr daqiiqo gudahood. Baro siyaabo ka badan ku cadaadisaa videos la software iyo waxaan sugeynaa talooyin iyo fikrado hal abuur leh.
Sida loo Edit MOV Video Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo Edit MKV Video Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Sidee inay la midowdo Videos fudud oo dhakhso ah
Tirtiray Movie Recovery: 3 Talaabada inuu ka soo kabsado Movies masaxay
Sida loo sameeyo dhaceen Christmas Cards la Photos
Sida loo Edit VOB Video Files in Windows iyo Mac
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa Video ah oo la Wondershare Video Converter Ultimate